Komina | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Inona no kimera ilaina: properties, recipes, applications
Tsy i Cumin no sehatra mahazatra indrindra eto amin'ny firenentsika, fa ny rehetra kosa dia mahalala ny tsiron'io zavamaniry io. Amin'ny fampihinanana, ny voa fotsiny ihany no ampiasaina. Amin'izao fotoana izao dia mijery ny kumina isika, ireo toetra amam-panafody sy ny fanoherana. Ny endriky ny karaoke sy ny soatoavina mahavelona Ao anatin'io zavamaniry io dia misy vitamina maro. Ny voangory Cumin dia misy vy, phosphor ary calcium betsaka.
Ny kumina sy ny dill dia mitovy?
Misy zavamaniry mitovy mitovy amin'ny rano roa. Ary mba tsy hampifangaro azy ireo, tokony ho fantatrao ny fomba fijerin'izy ireo sy ny maha samihafa azy. Ity mpivady tsy mahazatra ity dia ahitana zava-manitra iraisana roa - dill sy cumin. Famaritana sy endriky ny zavamaniry Na dia eo aza ny fitovian'ny zavamaniry rehetra, mba hanavahana azy ireo dia tsotra.
Karazana fampiasana oliva mainty hoditra ao amin'ny cosmetology
Ny fanamarihana voalohany momba ny fanasitranana ny menaka oliva mainty dia niseho arivo taona lasa izay, tany Asia sy ny Afovoany Atsinanana. Dokotera maro sy mpikaroka (Hippocrates, Avicenna, Dioscorides) no niresaka momba izany tao amin'ny asa sorany. Ny lahatsoratra dia hilaza aminao ny fomba fampiharana ny solika, dia hampiditra ny endri-javatra amin'ny fampiasana ity vokatra ity amin'ny fitambaran'ny kosmetika ho an'ny fikarakarana ny hoditra sy ny fanesorana ny tsy fahampiana kosmetika.
Ny endriky ny vokatry ny cumin amin'ny vavony sy ny tsinay
Cumin - zavamaniry iray tsy manam-paharoa, fantatra amin'ny hoe spice, dia ampiasaina amin'ny sehatry ny kulinar, fa koa ho toy ny fitaovana fitsaboana ho an'ny aretin'ny gastrointestinal. Ny momba ny vokatra mahasoa eo amin'ny vatana sy ny fitsipiky ny fampiharana dia horesahina etsy ambany. Ny famaritana botanika momba ny orinasa Cumin dia mambra biennial na maharitra eo amin'ny fianakaviana Umbrella.
Ahoana ny fampiasana ny tombom-barotra mainty hoditra ho an'ny fahavoazana
Cumin dia tsiro malaza izay ampiasaina betsaka amin'ny sakafo. Na izany aza, tsy ny rehetra no mahafantatra fa noho ny singa miavaka simika, ny voankazo sy ny menaka avy amin'io zavamaniry io dia afaka mitondra voka-tsoa mahavariana eo amin'ny vatan'olombelona, ​​anisan'izany ny fampiroboroboana ny fahavoazana. Ahoana ny fiheveran'izy ireo ny fahavoan'ny fahavoazana - vakio ity lahatsoratra ity.
Ireo toetra amam-pitsaboana sy ny fanoherana ny fampiasana voan-kimavo
Ny voan-kimavo dia manamboatra vokatra famokarana, ampiasaina ho zava-manitra ao amin'ny hena sy ny trondro. Ny Cumin dia manome azy ireo fanandramana miavaka, manify sy mamy. Ankoatra izany, ampiasaina amin'ny prescriptions ho an'ny fitsaboana hafa izy io ary fantatra fa fitsaboana amin'ny fanafarana ofisialy any Kanada, Soisa, Aotrisy ary firenena hafa.
Ireo endri-javatra amin'ny fampiasana oliva mainty hoditra ao amin'ny oncology
Ny amboadia mainty hoditra mandritra ny taonjato maro dia ampiasaina ho toy ny zava-manitra kiziniana. Fa, ankoatra izay, ny menaka avy amin'izy ireo dia manana toetra manasitrana miavaka izay ampiasaina amin'ny fitsaboana, anisan'izany ny fitsaboana ny homamiadana. Vakio bebe kokoa momba izany - amin'ny lahatsoratra. Ny firaisana ara-tsimika Ny hodinihina dia ahitana karazana asin-tsiranoka tsy manasitrana sy be loatra, phospholipides, asymmina 15 (8 no tena ilaina), karotenoides, vitamin E, D, C, vondrona B, mineraly (potassium, sodium, phosphorus, calcium, manganese, vy, zina, varahina, selenium, nikel, sns.
Karazan'ny mainty hoditra misy tantely
Ny kôkômbia mainty dia ampiasaina amin'ny sehatry ny kulinarina, izay ampiasaina ho zava-manitra, saingy aza atao ambanin-javatra ny fananana fanasitranana ny zavamaniry, indrindra fa miaraka amin'ny zavatra hafa mahasoa. Anisan'ny fanampim-panafody be indrindra amin'ny menaka na menaka mainty hoditra ny tantely, izay toy ny trano fitehirizam-bokatra fotsiny ihany.
Ny endri-javatra amin'ny fampiasana menaka oliva mainty misy pancreatitis
Misy karazany 30 eo ho eo eto amin'ity izao tontolo izao ity, 10 amin'ireo dia azo jerena ao Rosia. Ao amin'ny firenentsika, ny kuminina dia antsoina koa hoe coriander mainty, voan-katsaka na Kalindzhi. Aza ampiasaina amin'ny endriky ny masomboly ho an'ny karazan-tsakafo samihafa, fa ataovy koa ny menaka, izay zava-boajanahary azo ampiasaina be izay afaka manampy amin'ny aretina maro.
Ny fanasitranana menaka oliva mainty hoditra ho an'ny lehilahy
Black cumin - zavamaniry tena mahasoa izay manankarena amin'ny vitamina, mineraly ary zavatra hafa rehetra. Ny alika avy amin'ny voa dia afaka manatsara ny fahasalaman'ny lehilahy. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia heverintsika ny tombontsoa lehibe sy ny mety ho fanoherana ny kimaina mainty amin'ny prostate sy ny olana hafa ao amin'ny lehilahy.
Fampiasana kumpta hampitomboana ny fihomehezana mandritra ny fampinono
Amin'ny fitsaboana hafa, ny cumin dia heverina ho iray amin'ny fomba mahomby indrindra hampitomboana ny fihenanana mandritra ny fampinono. Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hiomanana sy haka ireo fitaovam-panampiana voatokana ho an'ny reny tanora, ary koa ny fihetsika manoloana azy amin'ny fanafody ofisialy. Famaritana sy ny firafitry ny masomboly Cumin - fomban-tsolika avy any Eurasia.
Karazana fampiasana kômana mainty mandritra ny fitondrana vohoka
Vehivavy miandry ny fahaterahan'ny zanany dia mijery ny fahasalaman'izy ireo ary mifantina amin'ny safidiny. Amin'ny ankapobeny, ilaina ny mahafantatra ny fomba fampiasana habetsa malaza toy ny kôkônina mainty mandritra ny fitondrana vohoka, ary inona no fepetra tokony horaisina.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Komina